कूटनीति र महिला - विचार - कान्तिपुर समाचार
बाढीको बहुआयामिक जटिलता
भाद्र ५, २०७४ सोमत घिमिरे
नेपाल–भारत सिमाना पर्ने बाँधहरू यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धका असमानताका चिनो हुन् । यस विषयमा सामान्यतया बाढी आएका बेलामात्र छलफल गर्नु र अरू बेला लुकाउनु हाम्रो नियति बनेको छ ।
सत्तामा पुग्ने निस्कने खेलबाट डराएर राजनीतिक वा कूटनीतिक संवादमा यस्तो विषयले प्राथमिकता पाउँदैन । बाढी आएका बेला हामी भित्रको राष्ट्रवाद मौलाएर आउँछ र विस्तारै खुम्चिँदै जान्छ । यो चक्र हामीबीच दोहोरिँदै आएको छ । यो चक्रको डरलाग्दो पक्ष के भयो भने बाढीको बहुआयामिक जटिलताले छलफलै पाउँदैन । वर्षेनि बाढी आउँछ । हामी राष्ट्रवादी हुन्छांै । अरू धेरै विषय ओझेलमा पर्छन् । रचनात्मक छलफलको लागि बाँधजस्ता विषयहरू अवरोधको रूपमा रहेका छन् । बाँध वरिपरिको छलफलले अरू धेरै विषय बाहिर पारिरहेको छ । यी असमान सम्बन्ध धेरै पहिला भत्कनुपर्थ्यो ।
मधेसमा बाढीको बहस गरिनुपर्ने मुख्य विषयमध्ये एउटा हो, चुरेको व्यवस्थापन । चुरेबाट दुई सयभन्दा बढी साना–ठूला खोला बग्छन् । चुरेको व्यवस्थापन हुनसकेन भने ती खोला मधेसको ठूला काल बन्छन् । चुरेको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आउने अर्को विषय भू–उपयोगको व्यवस्थापन हो । चुरेदेखि दक्षिणसम्मको क्षेत्रलाई कसरी र कस्तो रूपमा जमिनको व्यवस्थान गर्ने यो महत्त्वपूर्ण छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय जीविकोपार्जनको ठूलो संकटमा छन् । चुरेको व्यवस्थापन भन्नु प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्पान मात्रै होइन । त्यहाँ बस्ने समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन पनि हो । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा होचो, कलिलो र कान्छो पहाड हो । यस्तो माटोमा के खेतीपाती गर्दा माटोको संरक्षण हुन्छ ? प्राविधिक रूपमा खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा चुरेबाट दिनदिनै माटो नखसोस् । अर्काे, चुरो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ अर्थात ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती छ ।
अहिले हामी संघीयताको सन्दर्भमा छौं । स्थानीय सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याउन सक्छ । चुरे क्षेत्रमा बाढी रोक्न सर्वथा आवश्यक र प्राथमिक काम भू–उपयोग नीति हो । भू–उपयोग नीतिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने चुरेको संवेदनशीलता ख्याल गरी बाढी प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । बस्ती व्यवस्थापन, चरनको व्यवस्थापन जस्ता विषय भू–उपयोग नीतिले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । चुरे क्षेत्रका प्रत्येक गाउँपालिकाले भू–उपयोग नीति निर्माण गर्ने र प्रदेशले पनि यही दिशामा सहजीकरण गर्ने हो भने आउने दिनमा बाढीको प्रकोप कम हुनसक्छ ।
बाढीको एउटा चरित्र के हो भने कारण एक ठाउँमा हुन्छ, प्रभाव र असर अर्को ठाउँमा हुन्छ । हाम्रो मधेसको बाढीको प्रकृति यस्तै हो । चुरे क्षेत्रको वातवरणीय विनाशले तलको मधेसको समथर भागको जनजीवनलाई ध्वस्त पार्छ । कारण एउटा राजनीतिक एकाइमा हुनसक्छ अर्थात अर्को गाउँपालिका वा प्रदेशमा पनि हुन्छ । तर प्रभाव अन्तै हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक भूगोललाई प्राकृतिक स्रोतले मान्दैन अर्थात प्राकृतिक स्रोतको आफ्नै भूगोल र क्षेत्र हुन्छ । मधेसमा बस्ने व्यक्ति, समुदाय, सरकार र निजी क्षेत्रको चुरे संरक्षणमा भूमिका खोज्न जरुरी छ । माथिका समुदायले प्रकृति अनुरूप व्यवहार नगरेमा त्यसको सोझो असर तलका समुदायमा पर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायको जीविकोपार्जनको सवालमा मधेसका स्थानीय तह, व्यक्ति, समुदायको भूमिका के हुनसक्छ, खोज्नुपर्छ । माथि बसेका समुदायले वातावरण जोगाउन योदान गरेबापत, पानी मुहान संरक्षण गरेबापत, वनजंगल जोगाए बापत, पाउने लाभ के हो ? अब यसबारे छलफल हुनुपर्छ । तल रहेका सरकार, समुदायले माथि बस्ने समुदायलाई अपिल गर्न सक्नुपर्छ । वातावरण जोगाए बापत तपाईंहरूले पाउने यो हो भन्न सक्नुपर्छ । तल बस्ने समुदायले त्यसको विधि र प्रक्रिया उल्लेख गर्न जरुरी छ । तर अहिले यसो भन्दा मधेसी समुदाय वा मधेसका स्थानीय सरकारले जनजाति समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय मधेस विरोधी विषय हो भन्न पनि बेर मानिँदैन । तर सत्य कुरा के हो भने चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायको जीविकोपार्जनको सहयोग नगरिकन व्यक्ति वा समुदायमा चाप घट्दैन । तसर्थ तल समथरमा बस्ने समुदायले माथि बस्ने समुदायलाई केही सहयोग गर्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो प्रकारको प्रचलनलाई वातावरणीय सेवा भुक्तानीको सैद्धान्तिक ढाँचामा व्याख्या गरिएको छ । एउट प्रश्न उठ्न सक्छ, किन मधेसको समुदायले माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ? यस्तो सहयोग त केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ । हेर्दा यो भनाइ ठिकै देखिए पनि केन्द्र त्यति संवेदनशील हुँदैन । केन्द्रले सहयोग त गर्न सक्छ, तर स्थानीय सरकारको पनि अवश्य भूमिका खोज्नुपर्छ । किनभने सबैभन्दा प्रभावित उनीहरू नै हुन् ।
अर्काे हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय विकासको मौलिक मोडल र विकास प्राथमिकता सूची हो । अहिलेको हाम्रो विकास मोडल पश्चिमा देशहरूको अनुसन्धानमा आधारित नक्कल गरिएको मोडल हो । जुन विकासले भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिन्छ, बजारलाई जोड दिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई जोड दिन्छ । प्रकृतिलाई मानिसभन्दा तल राखेर हेर्छ अर्थात मानिस प्रकृतिलाई दोहन गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता राख्छ । यहस् मान्यता अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा धेरै साना–ठूला सडकहरू बनेका छन् । चुरे क्षेत्रमा सडकमात्रै होइन, उद्योग पनि खोलिएका छन् । नवलपरासीमा सिमेन्ट उद्योग नै छ । त्यसले चुरे क्षेत्रमा कसरी स्वीकृत पायो होला ? अनौठो छ, अहिले चुरे क्षेत्रमा वातावरणमैत्री विकासले छलफलको लागि ठाउँ नै पाएको छैन । चुरे क्षेत्र वातावरणीय दृष्टिकोणले कलिलो र कान्छो भनिएको छ । तर त्यस्तो कान्छो र कलिलो पहाडमा गरिने विकास अन्यत्रको जस्तै छ । जुन कुरा चुरेको भूगोलले थेग्नै सक्दैन । तर हामी त्यही गरिरहेको छौं । चुरे क्षेत्रको विकासको मौलिक बाटो के हो ? चुरेभित्र सडक खन्ने कि महँगो नै सही केवलकार राख्ने ? चुरे क्षेत्रमा बस्ने समुदायको जीविकोपार्जनको उत्तम बाटो के हो ? यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ । एक पटक मधेसको बहुआयामिक अप्ठ्याराबारे खुला छलफल हुन जरुरी छ । यसले विकासको मौलिक नक्सा कोर्न सकोस् । वातावरणीय संरक्षण र जीविकोपार्जन सँगसँगै हिँड्न सकुन् । अन्यथा हामी लामो समयसम्म यही फन्दामा पर्छौं । मधेसी समुदायको लागि चुरे पानीको स्रोत र वातावरणीय विषयमात्रै नभएर आस्थाको विषय हो । त्यसैले आम मधेसी समुदायले चुरीमाई भनेर देवताको कोटीमा राख्छन् । हाम्रो पुर्खाले भनेको देवतालाई काल बन्न दिने/नदिने हाम्रै हातमा छ । प्राकृतिक प्रकोपको कुरा धेरै चमत्कारबाट न्यून हुने कुरा होइन । प्राथमिकतासाथ सूची तयार पारी काम गर्दै जाँदा सम्बोधन हुने कुरा हो । भू–उपयोग नीति, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार, नदीजन्य पदार्थ उत्खननको वैज्ञानिक नियमनजस्ता विकासको मौलिक बाटोलाई अनुुशरण गर्नसक्ने हो भने मधेस जोगिन सक्छ ।